> Resource > Android > Sida loo Beddelaan regelingen in MP3 u Google Music
Regelingen inta badan u taagan tahay tayada audio sare. Dad badan ayaa weli ka iibsan CD oo iyaga saaro in qaab regelingen. Nasiib darro, Google Music ma taageeri qaab regelingen. Sidaas ay tahay in aad sii joogo ka Google Music, ama aan ka helo qaar ka mid ah habka ay u dhigay regelingen on Google Music .
Sida tayada audio, Google Music taageero ilaa 320kbps MP3 music, kuwaas oo, ayaa aniga fikradaydu, waa wanaagsan oo ku filan in ay dhagaystaan. Xataa FLAC, mid ka mid ah qaab audio sameecadda ah oo caan ah, la transcoded lahaa in 320kbps on Google Music. Haatan waxaan idin ​​tusi doonaa sida loo badalo regelingen in MP3 tayo sare leh si aad kara regelingen in Google Music geliyaan oo uu u ciyaaro meel kasta oo gebi ahaanba.
Waxa aad u baahan tahay oo kaliya regelingen ah in MP3 Converter sida Wondershare Video Converter , oo loogu bedeli karin keliya ma aha regelingen in MP3, laakiin sidoo kale taageertaa wax caadi ah audio files in MP3 diinta. Haddaba bal fiiriya sida loo badalo regelingen in MP3 in talaabooyin fudud ka hor inta si Music Google. Download iyo rakibi Video Converter hore.
Tallaabo 1: Ku dar files regelingen in Video Converter
Open Video Converter , oo markii hore ku darto files regelingen aad rabto in aad si loogu badalo in MP3 format Google Music ah. 2 siyaabo waxaa laga heli karaa:
1. Click on the " Add Files "button shaashadda ee Converter Video ah.
2. Si toos ah jiidi oo hoos u faylasha galay guddi liiska.
Talaabada 2: MP3 format Set sida bartilmaameedka
Riix ah " Qaabka Output "in la furo liiska horena audio format, kaas oo ay doortaan MP3 ka" Audio "cubcategory sida qaab bartilmaameedka. Si aad u hesho tayo sare leh MP3 files, guji "Settings" si ay u muujiyaan ilaa ay wada hadal goobaha sare. Markaas bedeli Rate Inyar in 320 kbps , taas oo ah qaabka ugu badan oo ay taageerayaan Music Google. Heerka yara default noqon lahaa 128 kbps in guud ahaan la aqbali karo u isticmaala inta badan.
Talaabada 3: regelingen in MP3 Conversion Bilow
Guji " Beddelaan "button marka wax walba waa diyaar, iyo Video Converter badalo doonaa dhammaan faylasha regelingen si aad u qaab MP3.
Talooyin : Waxaa jira goobo badan oo kaa caawinaya inaad isticmaasho regelingen in ay MP3 Converter si fiican. Guji "Xulashada" button ee geeska midig sare inuu isbedel ku sameeyo.
Marka regelingen in MP3 diinta ku dhameysatay, isticmaalaan Manager rasmi Google Music inay geliyaan tayo sare leh MP3 files si Google Music .
Waa maxay regelingen?
Regelingen waa qaabka audio caadiga ah loo isticmaalo CD, taas oo inta badan ku badbaadi xogta audio qaab 44,1 Khz, 16-yara iyo rikoodh. Files regelingen la mid yihiin faylasha AIFF. Regelingen waa qaabka audio ugu badan ee loo isticmaalo kombiyuutarada Windows-ku salaysan, halka AIFF wuxuu ku badan yahay nidaamyada Macintosh. Labada iyaga ka mid ah ma taageersana by Music Google.
Shan Waxyaabaha aad Ogaato VLC ee Android Player